Caanaha nadiifinta caanaha - iSearch
Start farmashiye caafimaadka nadiifiye ridaysa vacuum
nadiifiye ridaysa vacuum
Dad badan ayaa ku dhacda xasaasiyadda beerta boodhka, halkaasoo caaradu ku taal. Sababtan awgeed, kuwa daneeya ayaa sidoo kale eegaya mid gaar ah nadiifiye ridaysa vacuum, Laakiin intee le'eg yihiin kuwan iyo kuwa kaleba, miyay kuwan sidoo kale ku xiri karaan boodhka boorsada? Tani waa tii imtixaankaan lagu sameeyey mar mar iyo qaar ka mid ah nadiifinta nadiifinta ayaa horey ugu jirtay muraayada weyn ee Stiftung Warentest.
1 Cayayaanka qasdigooda iyo shaqadooda
2 Qiiqa nadiifiyaha ah ee tijaabada macaamiisha
3 Caaro badan oo boodh ah marka la barbar dhigo
4 Jawaabtu maahan mid aad u fiican
5 Qiimaha jaban
Cayayaanka qasdigooda iyo shaqadooda
Qofkii akhriya xayeysiintu, dabcan, wuxuu si toos ah u fakarayaa in caarada nadiifinta badan ee fayadhowrka la galiyo. Nasiib darro, tani maaha sidaas, markaa qaabka hawlgalka waa in loo tixgeliyaa halkan. Nadiifiyeyaasha noocan oo kale ah looma dhisi karo si ka duwan sida nuucyada caadiga ah, oo leh farqi yar. Nooca wax lagu nadiifiyo ee boodhka ah ee loo yaqaan "vacuum powder" waa mid si fiican u xiran, oo si dhib leh wax kasta oo hawada mar kale ku dhacda. Laakiin dhab ahaantii halkan waa mabda 'ahaan' dhibaatada ah in badan oo ka mid ah nuugayaashaas aan si dhab ah u nuugin boodhka guriga. Sidaa darteed, saameyntu ma aha mid aad u sarreeya, tan iyo boodhka guriga iyo cayayaanka ayaa weli ku jira hawada. Dabcan, waxaa jira sidoo kale nadiifin badan oo nadiifin ah, kuwaas oo sidoo kale ku magacaaba nadiifiyaha nadiifiyaha ah. Halkaan, awoodda nadiifinta labadaba waa ku filan tahay, sida boodhka guriga weli ku yaal inta badan bacda. Qiimaha lagama maarmaanka u ah imtixaankan, laakiin kaliya natiijada. Si kastaba ha noqotee, nadiifin badan oo badan oo nadiifin ah ayaa sidoo kale soo martay nadiifinta, gaar ahaan kuwa ku magacaaba nadiifiyaha nadiifiyaha. Halkan, boodo badan oo guriga ah ayaa weli ku haray, taas oo weli leh xasaasiyad xasaasiyadeed. Laakiin tani waa sida uu qofku u leeyahay inuu daryeelo, si ay hawada ugu fog ee suurtagal ah uga hesho boodhka guriga waa la sii daayaa. Waxaa sidoo kale muhiim ah in nadiifiyaha faakiyarada bacaadka ah uu bacda ku hayo. Laakiin halkan ku dhowaad dhammaan qalabka nadiifinta ah waa kuwo wanaagsan, taas oo markaa tijaabo ayaa sidoo kale keentay. Kaliya guntinta boodhka guriga, halkan waxay ahayd naqdin weyn. Halkaan waxaa la nuugay hal saac illaa saacad, laakiin nasiib daro nuugayaasha qaarkood ma fiicna. Sababtoo ah halkan waxaa muhiim ah in nadiifiyaha hawada nadiifinta sidoo kale ay nuugaan caarada boorka, taas oo hadda ku jirta boodhka guriga. Laakiin sida dhabta ah ee degaankan oo dhan suckers waa ka badan ama ka yar wanaagsan. Laakiin baaritaankan waxaa lagu sameeyey shuruudo shaybaar oo badanaa waxba kama sheegin baaritaanka maalin kasta. Tani waa sida ay macaamiishu u sameeyeen hal mar isla markaasna la wadaagaan waaya-aragnimadooda.
Qiiqa nadiifiyaha ah ee tijaabada macaamiisha
Dabcan ma aha in dhammaan soo saarayaasha la tixgelin karo, sababtoo ah hadda waxaa jira dad badan. Laakiin qaar ka mid ah iyaga ayaa tijaabiyay naftooda, taas oo sidoo kale ka dibna noqon kartaa kuwa aan aqoonta lahayn. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in nadiifiyeyaasha caarada caarada ah aysan sidoo kale si fiican u qabin Stiftung Warentest. Mid ka mid ah kuwan waxay ahayd nadiifiye fara badan oo Vorwerk ah, taas oo aad u la yaab leh. Waxa uu ahaa dhab ahaantii soo-saare tan iyo markasta oo aad u fiican, sidaas awgeed waa isbeddelay. Sababtoo ah waxaa jira warshadaha tamarta nadiifka ah iyo sidoo kale wax lagu nadiifiyo nadiifinta alaabta nadiifka ah, iyada oo aan la iibsan iibka waa in la aqbalaa. Tani waa kiiska Vorwerk, sababtoo ah nadiifinta nadiifinta waa qaali. Laakiin halkan waxyaabo kale ayaa muhiim ah, sida hawlgalka iyo, dabcan, awoodda wax soo saaridda. Ka dib markaa, macaamiishu waxay sidoo kale ku tilmaameen natiijooyinkooda, iyo sidoo kale haddii nadiifiyaha faakuumka nadiifiyaha ahi dhab ahaan u fiican yahay dadka xasaasiyadaha xasaasiyadda. Dhammaan waxaas ma dhicin kaliya saacad, laakiin sida caadiga ah loo isticmaalo. Tani imtixaan noocan oo kale ah ayaa sheegi kara, maxaa yeelay ma jiro wax wasakh ah oo la isticmaalo. Macaamiishu ma aha oo kaliya waxay muujiyeen fikirkooda ku saabsan caarada nadiifiyaha caadiga ah, laakiin sidoo kale nadiifinta joodariga. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay sidoo kale nuugi kartaa suufka kale, laakiin ma aha nadiifiye fuuqbax. Tani sidoo kale waa kiisaska nadiifiyaha nadiifiyaha ah, taas oo markaa loo isticmaali karo oo keliya karka. Waxay muhiim u tahay tusaalahan in tani aysan lahayn boorso, taas oo macnaheedu yahay in hal weel oo kaliya waa in la faaruqiyo. Tani waxay si gaar ah si fiican u heshay macaamiisha, xitaa haddii qiimaha iibsigu wax yar ka sareeyo. Nadiifiyaha fuuq-gacmeedku wuxuu ahaa hoover, shirkad aad u fiican. Tani waxay u taagan tahay tayada sare, taas oo saameyn ku yeelata nadiifiyaha faakuumka. Halkan, macaamiishu dhammaantood way ku qanacsan yihiin, marka laga reebo hal macaamil. Tani waxay si cad u heshay nadiifiye farsamoyaqaan ah. Dabcan macaamiishaani ma sameyn karaan qiimeyn wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, nuugan ayaa weli helay 4,9 dhibcaha 5, taas oo runtii ah natiijo aad u wanaagsan. Gaar ahaan tan tan run ahaantii way ka baxday dhammaan boogaha ka yimid boodhka guriga iyo caarada, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah dadka qaba xasaasiyadda. Xitaa haddii caaradadani nadiifiye ah oo aan lahayn faahfaahin nadiif ah, kan danbe wuxuu dhab ahaantii ku qancin karaa macaamiisha. Tani waxay sidoo kale sidoo kale lagu muujiyey weelka wasakhda, sababtoo ah halkan wax waliba waa mid wanaagsan. Nadiifinta sidoo kale waa mid aad u fudud, iyada oo aan boodhka guriga mar kale baxsaday.
Caaro badan oo boodh ah marka la barbar dhigo
Laba nadiifiye gacmo-gacmeed ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida fayadhowrka caadiga ah. Tani waxay markaa la sameeyaa ulo telescopic ah, taas oo sidoo kale iyada oo aan lahayn bacaha la helo. Waxaa intaa dheer, labada nadiifiyeeyaalku waxay la shaqeeyaan nalka UV, kaas oo loo isticmaalo in lagu dilo 99,9% ee caarada. Nadiifinta qalabka nadiifka ah waa inay si fiican u nuugaan wax wasakh ah, intaa waxaa dheer in ay leeyihiin shaandhooyin gaar ah, si aan waxba loo helin hawada. Labaduba waxay ka yaryihiin shirkadaha aan la aqoon oo waxay ku jiraan 100 Euro. Mabamaho caarada wax lagu nadiifiyo ayaa si aad ah ugu qanacsanayd si sahlan oo wax looga qabto. Intaa waxaa dheer, waxqabadka waxqabadka wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan, ka dibna wax waliba nadiif ahaa. Sidaas darteed farsamada buunshuhu waxay heleen dhibcaha 5 buuxa. Qofka macaamilka ah wuxuu ku qanacsan yahay nadiifiyaha qashinka caarada qashinka ee Brubaker, gaar ahaan sababtoo ah awoodda wax soo saaridda fiican. Si kastaba ha noqotee, nadiifinta caarada buunshaha waxay ka shaqeysaa kaliya 800 Watt oo sidaas darteed waa ku habboon carrada saafiga ah. Kaarbooyinka leh dabaqa sare waxay abuurtaa tan markaa wax wanaagsan maahan. Laakiin macmiilkaan ayaa aad ugu qanacsanaa natiijooyinka, gaar ahaan barkada. Macaamil kale ma uusan ku qanacsaneyn, sababtoo ah wuxuu helay qalab qaldan. Dabcan tani waxay dib ugu noqotay shirkadda.
Hoover MBC500UV, Ultra Vortex Mattress nadiifiye, ...
Dyson V6 Bacaha joodariga & qalabka nadiifinta qashinka ...
Sidaa daraadeed dib u eegista badanaa waa isku dhafan. Qalabka wuxuu helay 3,9 oo ah dhibcaha 5, oo aan lahayn waxqabadka waxqabadka. Tani inta badan waa natiijada imtixaanka macaamiisha, taas oo aan ka yarayn qalabka calaamadeysan. Qashin kale oo nadiifiye ah oo lagu nadiifiyey boodhka oo la tijaabiyey wuxuu ahaa Thomas's Aqua, Staube und Waschsauger. Si kastaba ha noqotee, nuucaasu waxuu ka qiimo badan yahay Euro 200 waana inuu markaa runtii aad u fiican yahay. Dhab ahaan tan kaddib waxaa lagu tijaabiyey macaamilka mar aad u dhow, sababtoo ah qiimaha noocan oo kale ah waxa laga filanayaa waa wax aad u sareeya. Nadiifiyaha fuuqbaxan waxaa loo isticmaali karaa bacaha iyo nidaamka filimka aqua. Sidoo kale, nadiifiyaha faakuumada caarada ee hawada ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa qashin boodh ah, kuwa aan had iyo jeer doonaynin in ay mar walba isku dhaqaan marada. Haddii kale, nadiifiyaha faakuumadahan waxaa sidoo kale ku jira bacaha, taas oo muhiim u ah dad badan oo maanta ah. Si kastaba ha ahaatee, soo-saaraha halkan ma xayeysiis toos ah, taas oo ah nadiifiye farsamo. Halkii, wuxuu la hadlaa milkiilayaasha xayawaanka, laakiin markaa dadka xasaasiyadeed ee xasaasiyadeed ayaa ku guulaystay in ay qaataan nuugan. Natiijada, waxay ku qanacsan yihiin, xitaa haddii qaliinku yahay mid aad u qallafsan. Xagga sare ee miisaankiisu sarreeyaa wuxuu ahaa halkan sababaha dhibcaha laga jaray. Sidaa daraadeed, nuugistu waxay heshay wadarta 4,3 ee dhibcaha 5.
Jawaabtu maahan mid aad u fiican
Tani waxay sidoo kale ahayd natiijada macaamiisha, taas oo ay ku jiraan shirkado badan, kuwaasoo xasaasiyad ku leh xasaasiyadda. Nadiifiyaha faakuumada caarada ee aalada boodhka ah ayaa qiimo badan ka qiimo badan yahay nadiifinta fuuq-celinta caadiga ah. Sidaa darteed, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa qaabka iyo nidaamka filter ka hor intaadan iibsan. Kadibna waxaa jira shaandhad farsamo caadi ah, taas oo markaas bixisa waxqabad isku mid ah. Sababtoo ah mashiinka dhuumaha nadiifiyaha ah ayaa badanaa leh qalab iyo waxoogaa waxoogaa ah oo ka badan nadiifiyaha caadiga ah ee nadiifinta, waxay si fudud ujiraan lacag badan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira nadiifiyeyaasha nadiifinta ah ee caarada, kuwaas oo markaa aan ka sii xumaaneynin alaabada qaaliga ah. Halkan, waayo-aragnimada macaamiishu way caawin karaan. Dabcan, imtixaan ka yimid Stiftung Warentest sidoo kale waa gargaar qiimo leh. Si kastaba ha noqotee, sida caadiga ah, alaabada calaamadeysan oo kaliya ayaa lagu tijaabiyaa, taas oo inta badan aan la kulmin dhammaan waxyaabaha laga filayo. Sidaa darteed, halkan sidoo kale, waxaa jira tusaalooyin keliya oo aan ku guuleysan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la isticmaalo nadiifiyaha faakuumada caarada. Waxaa sidoo kale jira kala duwanaansho. Tani waxay sidoo kale ahayd sababta keentay in nuugistu Thomas ka ahayd mid aad u xun. Sababtoo ah tan waa in si taxaddar leh loo qabtaa, haddii kale biyaha ayaa ka baxsan. Tani waxay ka badan tahay wax dhib ah, sababtoo ah nadiifinta waa in ay u guurisaa. Maxay muhiim u ahayd, nadiifinta fuuqbaxa aan lahayn bacaha. Tani waa xaqiiqda ah dhammaan caarada boodhka ah ee ay la kulmeen, taas oo mid ka mid ah laga yaabo inuu ku shaqeeyo bacaha. Si kastaba ha ahaatee, macaamiisha midkoodna ma isticmaalin boorso, sababtoo ah kuwani waxay xor u noqon karaan boodhka guriga, sidaas awgeed mar kale caarada caarada. Sidaas darteed nadiifinta fuuq-celinta caadiga ah ee aan lahayn bacda ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa nadiifiye farsamo. Si kastaba ha ahaatee, tani waa inay leedahay filter aad u fiican, sidaas darteed boodhka dhabta ah kama baxsan karo. Tani waa xaqiiqda ah waxa nadiifiyaasha nadiifka ah, kuwaas oo badanaaba nadiifiyeyaasha nadiifka ah ee caadiga ah ay horay u qaban karaan. Sidaas awgeed xulashada ayaa ballaarisa, taas oo ka mid ah dalabku weli nuugo, kuwaas oo dhab ahaan loogu talagalay milkiilayaasha xayawaanka. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqooyinkaasi waxay sidoo kale buuxinayaan shuruudaha lagu dhejiyo nadiifiye farsamo.
Sidoo kale tani ma ahan shuruudo, laakiin waa inay noqotaa mid faraq u ah in la helo. Farqigaas ayaa markaa laga heley oo keliya qiimaha, waxqabadka wuxuu ku dhowaad isku midka ahaa dhammaan caarada nadiifinta. Sidaa daraadeed, macaamiishu ma tiirsanaan karaan xaqiiqda ah in nadiifinta alaabtu ay ka fiican tahay tani waxay noqon kartaa mid raqiis ah. Dabcan marar badan ayaa weli ah farqi u dhexeeya awoodda wax soosaarida, sida maareynta. Laakiin sidoo kale halkan moodhalka ugu wanaagsan ayaa awooday in ay sii wadaan, xitaa haddii ay lahaayeen awood yar. Taas awgeed, nadiifiyeyaasha caarada cayayaanka ah ayaa markaa nalalka UV, ka dibna lagu qiimeeyay macaamiisha aad u wanaagsan. Hadday dhab ahaantii wax ka qabato caarada, hadana lama xaqiijin karo imtixaankan. Sidaas awgeed dadka xasaasiyadda qabta waxay ku xiran yihiin khibradda macmiilka ama warbixinnada yar ee tijaabada ah. Sababtoo ah cayayaanka boodhka midkoodna kama dhaadhicin karo 100%. Si kastaba ha ahaatee, hal ama suckers kale ayaa ugu yaraan 90 boqolkiiba la kulmi kara, taas oo ah xitaa dad badan oo xasaasiyad qaba. Tani waa sababta xeerka halkan uu weli yahay xeerka, halkii loo yareeyn lahaa bambooyin yar, oo intooda badani raacaan. Sidaa darteed ayaa sidoo kale muhiim ah in la isticmaalo qashin-nadiifiyaha caarada, kuwaas oo loo isticmaali lahaa nadiifiye gacmeed. Joodariyeyaasha iyo kan kaniisadaha ayaa tijaabiyay macaamiisha. Kaliya marka la nuugo Thomas ayaa sidoo kale dabaqyo fiiqan leh. Tan iyo markii ay taasi ka dib ka buuxsami karto biyaha. Dhamaan nadiifiyayaasha kale ee nadiifinta waa in la isticmaalo si caadi ah. Haddii markaas qalabkii Thomas ma noqon laheyn mid aad u adag, markaa macaamiisha ayaa ku qanacsanaan lahaa.
Haddii aad xasaasiyad ku leedahay caarada, waa inaad fiirisaa nidaamka faylka markaad iibsanayso nadiifiye. Sidoo kale, nadiifinta saafiga waa inay sidoo kale ka baxdaa bacaha, sababtoo ah bacaha dib ayaa loo sii daayaa mar labaadna hawada. Sidaa daraadeed uma baahnid in lagu magacaabo "vacuum cleaner", laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa nadiifiye fayadhowr oo qaata timaha xayawaanka. Kuwani waa kuwo aad uga sareeya waxqabadka marka la barbardhigo nadiifinta nadiifinta caadiga ah. Dhammaan, wax soo saarayaal badan ayaa ku xayeysiiyay inay bixiyaan nadiifiye caarad oo gaar ah. Nasiib darro ma aysan awoodin in ay qanciyaan. Tani waxay u tahay xasaasiyado laakiin ka badan tahay niyadjab haddii ay weli dhibaato ka haysato nuugista. Kaliya nidaamka filtarrada aadka u wanaagsan ayaa mar kale ku qancin, sababtoo ah taasi waxay ahayd inta badan meelaha ugu liita. Sidaa daraadeed maaha inay ahaato nadiifiye faaruq ah oo soo saaraha wax soo saaraha, tan iyo sidoo kale alaabooyinka wanaagsani waxay bixiyaan waxqabad isku mid ah. Tani waxay sidoo kale ahayd natiijada imtixaanka Stiftung Warentest iyo sidoo kale imtixaanka macaamiisha. Gaar ahaan tan iyo shirkadaha badani waxay bixiyaan nadiifiye hawo nadiif ah xataa qaali. Waxaa markaa lagu sameeyaa xasaasiyadda dadka oo weli lacag dheeraad ah. Dabcan, halkan isbarbardhig qiimaha ayaa kaa caawin kara, si aad u hesho badeecad raqiis ah oo wanaagsan. Wakhti yar waa in had iyo jeer la isticmaalo, ka dibna runtii waa alaab qiimo leh oo weli raqiis ah si loo helo.
dalabXayawaan bixinta 1
Hoover MBC500UV, Ultra Vortex Mattress nadiifiye, Multicolor Show
Bacaha shaashadda / weelka boodhka ah ee nidaamka deymanka aan lahayn
Cabbirada aan la saarin (HxWxD) 34 / 26,5 / 18,5 cm
Tilmaamaha bacda / bacda qashinka lagu buuxiyo Haa
Qalabka buraashka ee la burburin karo Haa
Dhererka cabirka (m): 5
maxVitalis mite vacuum nadiifiye UV-C nalka, jeermis-dile u. Nadiifinta, gogosha furaashka gogosha, filtarrada HEPA waxay baabi'isaa ilaa 99,9% dhammaan caarada, iyada oo aan bacda lahayn, awood nuugid xoog leh, oo tilmaam u ah xasaasiyadda.
SIYAASADAHA QALABKA IYO XUQUUQDA DHAQANKA: Adigoo ku shaqeynaya nadiifiye gacmeedka nadiifka ah waxaad ka saartaa iftiinka UV-C, caarada, jeermiska, boodhka iyo manka si dhakhso leh oo la isku halleyn karo. Looma diidi karo dhammaan boodhka guriga iyo kuwa xasaasiyadda ku leh manka!
KU SAMEEYSA DHAQAALAHA & NADAAFADA NADAAFADA: Furaashka, barkadaha, barkimooyinka iyo saabuunta dharka lagu nadiifiyo ayaa dhammaantood lagu nadiifin karaa nadiifiyeyaasha UV Milk Vacuum - sidaas darteedna dhammaan aagagga ay ku cayaaraan cayayaanka guriga
SIYAASADA XIRFADAHA: Ilaa boqolkiiba 99,9 boqolkiiba caarada iyo jeermiga waxaa baabi'in kara iftiinka UV-C. Iftiinka aadka u waxtarka leh ayaa jeermis-qaada sagxadaha daweynta iyada oo aan wax kiimikooyin ah lahayn
NADIIFINTA CUDURKA CAAFIMAADKA. Marxaladaha 3, makiinadda faaruqinta mite vacuum nadiifinteeda si nadiif ah ayey u nadiifisaa: 1. Joojinta kufaya iyo caarada qarada. 2. Ku dilo caarada iyo jeermiska iftiinka UV-C. 3. Nuugista caarada iyo qurubyada wasakhda ah ee ugu wanaagsan
ILAALINTA XUQUUQDA EE SIDOOYINKA: filterka HEPA (filter ka bedelka ASIN B07SYJCG43) ee miiraha hawada nadiifiya miiraha waxayna xirayaan dhammaan boodhka iyo xasaasiyada waxayna ka hortagtaa inay ku soo noqdaan hawada qolka.
CLEANmaxx caarada nadiifiyaha gacanta | Nadiifi nadiifiye xoog leh oo nuug leh, ayaa dusha sare ku nadiifinaya iftiinka UV-C | 300Watt [Burbur ilaa 99,9% dhammaan caarada] soo bandhig
Naftaada ka ilaali caarada, jeermiska iyo microbes!
Iftiin UV-C ayaa si waxtar leh u burburisa 99,9% dhammaan caarada
Meelaha dushooda waxaa lagu nadiifiyaa iftiinka UV-C - iyada oo aan lahayn kiimiko
Hagaajinta joodariga iyo jeermiska joodariyeyaasha, yaryar, barkimooyin iyo waxyaabo kale oo badan
Xakamaynta ayaa la ruxruxaa, dusha sare ayaa la nadiifiyey iftiinka UV-C oo nuugay
CLEANmaxx caarada nadiifiyaha gacanta | Nadiifiyaha faaruqka ka hortagga cayayaanka ee leh nalka UV-C | Hal tallaabo nadiifin iyo jeermis-dilis filterka HEPA filter (caag tayo sare leh) (buluug) soojiidasho
DHAQANKA - Ka ilaali naftaada caarada cayayaanka, jeermiga iyo microbes! Daaweynta jeermiska oogada - oo aan lahayn wax kiimiko ah.
SAAMEYNTA - Iftiinka UV-C wuxuu si halleyn ah ugu dumiyaa illaa 99,9% dhammaan caarada qashinka iyada oo aan la helin kiimikooyin ama walxo kale oo nadiifa.
FLEXIBLE - Waxay kufiican tahay makiinadda faaruqinta iyo baabi'inta joodariyaasha, barkadaha, barkimooyinka, go'yaasha ama dusha sare.
HYGIENIC - filterka HEPA wuxuu sii wadaa xitaa walxaha ugu wanaagsan ee la xayiro, oo ku habboon dadka xasaasiyadda qaba.
FARSAMADA - Shaashadda la isticmaali karo oo dib loo isticmaali karo HEPA, oo si sahlan loo faaruqi karo weelka ciidda cabirkooda Cabirka: qiyaastii 28x34x11 cm. Awoodda: 220 V, 50 Hz, 300 W.
Xayawaan bixinta 5
Qalabka Feejiyaha Feejiyaha ee Dibea UV Furaashka 10000Pa 300W Awood leh oo leh xargaha 4,5m Bagless cyclone system Hepa filter 400ML Weelka qashinka Allergic sariirta fadhiga UV 10 tilmaame.
300 W / 10000Pa Awood leh】 Iyadoo gariirka ilaa 33000 wareegyada / daqiiqad iyo burush roodhida, nadiifiyaha joodariyadu ay garaacayaan caarada, unugyada maqaarka ee barkinta, joodariyada, fadhiga, iwm. Kuna tuur weelka weyn ee boodhka 400ml.
Lam Smart 20cm Long UV Lamp】 waxay si hufan uga saartaa caarada, xasaasiyadaha, boodhka joodariga oo si toos ah ayay u ogaataa walxaha gudaha 0 illaa 5 cm, si toos ah u shidaysa ama dami doonta.
System 6-marxaladda sisinta nidaamka duufaanta iyo shaashadda HEPA】 qabashada walxaha fiican ee cabirka xNUMX micron oo sii daaya hawo-cusub - oo kaamil ah dadka qaba xasaasiyadda.
Nadiifiyaha Weelka 400ml iyo 4,5m Long Cable】, 1,65Kg fudfudud khafiif ah oo mite vacuum sidoo kale waxay nuugi kartaa qashin qubka oo qoto dheer, timo xayawaanka oo waxay gaari karaan gaaritaan nadiif ah oo dheeri ah.
Soo-saare ahaan ahaan, dhammaan qalabka alaabada ah ee loogu talagalay nadiifinta faaruqa ah ayaa laga helli karaa annaguna marwalba waan ku faraxsan nahay inaan ka jawaabno su'aalaha.
dalabXayawaan bixinta 6
Nadiifiyaha Weelka Farsamada Gacanta ee PexFix, Farshaxanka Faraha Fudud ee Xirfadlaha 300W Nuugitaan xoog leh UV nadiifiyaha faakiyuumka nadiifiyaha ee xasaasiyadda iyo mulkiilayaasha xayawaanka leh calaamadaha casharka Jarmalka
Qalabka faashad gacanta makiinada UV】 253.7nm UV tuubada tuubada iyo 55 ℃ heerkulka kulul ee kulul waxay xaqiijisaa hufnaanta sare ee caarada dilaaga: heerka dilka dhiqlaha, caarada, microorganisms iyo bakteeriyada waa ilaa 99,1%.
【Frequency vibration】 Xawliga qalalaasuhu waa ilaa 5000 jeer / min. Xakameynta sare ee sarreeya iyo 300W awood xoog leh oo wax lagu nuugo waxay u fududahay caarada nuugista iyo boodhka joodariyeyaasha, gogosha iyo fadhiga.
【Sifeynta HEPA Advanced】 filtarrada HEPA (Karti Sare Particulate Air) oo Fayda 99,9% of ridaysa ciidda, wasakh, manka iyo dufta in deposit on dusha dhar u duqeeyey sida 0,3 microns.
【Nidaamka istiraatiijiga ah iyo nalka fudud】 Nadiifiyaha qalabka nadiifinta miisaankiisu waa miisaanka 2,6 kaliya waa iftiin adag iyo hal gacan. Xuddunta Korontada ee 16 wuxuu ku fiican yahay nadiifinta sariirta, kursiga fadhiga.
【Ku raaxayso oo noolnool oo daahir ah oo caafimaad qaba】 saarista ku ool ah ee ku ridaysa ciidda, dhiqlaha, bakteeriyada, dufta xayawaanka iyo manka, ku haboon joodariyaasha, sooffa, dahaarka, gogosha iyo Gogol (ma isticmaali karo sida huufar caadiga ah). Fiican ee ka cabanaya xasaasiyadda iyo milkiilayaasha xayawaanka.
Brandson - mite vacuum nadiifiye 300W - mite vacuum nadiifiye leh nalka UV - weelka wasakhda ah 150 ml - sariiraha jeermis jaban Dharka dharka ka sameysan ee dharka lagu nadiifiyo - mite vacuum nadiifiye ku habboon muujinta xasaasiyadda
Cayayaanka wasakhda ahi waxay quudiyaan digaagga bini-aadamka waxayna soo saaraan tiro badan oo ah walxo dheef-shiid kiimikaad. Gumeysiyada oo dhan waxay ku nool yihiin joodariga jiifka. Qalabka nadiifinta ee loo yaqaan 'Brandson mite vacuum vacuum' waxaad dishaa cayayaanka waxaadna xakameysaa culeyska xasaasiyadda ee qolka jiifka. Thanks to lamper lamp-lamp ster lamp, madaxa gariirka iyo awooda nuugida 300 W. | 303598
Nadiifiyaha e-UV-C wuxuu nadiifiyaa sariiraha, alaabta guriga iyo joodariyada, wuxuuna dilaa bakteeriyada, fungi iyo caarada habka wax ku oolka ah ee UV. Iftiinka UV-C wuxuu burburiyaa DNA-ga caarada wuxuuna dilaa in ka badan 93%. Bakteeriyada sida E. coli, staphylococci iyo fangaska halsano ayaa ku dhowaad 100 boqolkiiba la dilaa
Madaxa firfircoon ee nadiifiyaha vacuumku wuxuu ku faafayaa cayayaanka iyo qashinka wasakhda ah ee ka soo baxa dhulka kana soo baxa laabatooyinkiisa ka dibna ku nuugo gudaha
Filterka HEPA ee lagu isticmaalo aaladda ayaa ah kan ugu wanaagsan maxaa yeelay waxay leedahay fasal sifiican u wasakh leh A. Ka sokow caarada, waxay kaloo hayn kartaa manka iyo bakteeriyada. Si loo beddelo shaandhada, galinta ayaa si fudud looga soo qaadayaa guriga
Awoodda haanta wasakhda: 150 ml | Awood nuugista sare ee 10 kPa (Kilopascal). | leh wareejin loogu talagalay dhaqaajinta iftiinka UV iyo gariirka hoose | Nalalka-UV-C oo leh dareemayaasha amniga: laambada si toos ah ayaa dansan laambada markii aaladda dusha laga saaray)
Xayawaan bixinta 8
Qalabka faakiyuumka gacanta lagu nadiifiyo ee 'ROZI mite vacuum 10KPa, nadiifiye faakiyuhu oo leh miiraha' HEPA ', nuugista xoogga leh ee iftiinka UV ayaa meesha ka saaraysa kutaanta kutaala caarada barkinta, tuwaalada, sofas (300W) soo bandhig
Er Nadiifiyaha vacuum gacmeedka 20cm UV jeermis-ka-qaadis】 - 20cm dherer ah oo quartz UV ah ayaa dabooli kara dusha sare. Wuxuu adeegsadaa 253,7 nm jeermiinka 'UV' si ay u jebiso silsiladaha moodeka ah ee kujira DNA-da sheyga. Xaqiiji hufnaan sareysa xagga dilaaga caarada.
U Fayadhawrka hawada aan nadiifka ahayn ee 300W matoor aad u sarreeya】 - 300 W matoor tayo sare leh iyo ilaa 33000 kacdoon / min. Muuqaalka sare ee gariirku wuxuu dilayaa fayrasyada kujira, bakteeriyada, walxaha xasaasiyadeed, xajiimka iyo boodhka.
System Nidaamka shaandhada 6-marxaladda-The - Nidaamka shaandhada HEPA ee 6-heer ah wuxuu qabtaa 99,9% walxaha ka kooban, oo cabbirkoodu yahay 0,3 marooji mitir kaliya, si loo siidaayo hawo nadiif ah. (Tilmaamo: Fadlan badalo filterka HEPA labada ama seddexdii biloodba mar.)
Nu 10KPa nuugitaan xoog leh】 - 10 kPa nuugista awooda caarada, oo inta badan nuugo boodhka, iyo caarada dusha sare iyo dusheeda. waxay kuusoo tuurtaa qashinka kaadida qoto dheer ee gogosha sariirta iyo joodariyada ama waxyaabo lamid ah sida sofas, dharka oo si buuxda u nuuga.
Rush Burush jilicsan】 - Roodhida jilicsan ee jilicsan ayaa si fiican u nadiifisa qof kasta oo waliba diidaa in lagu duubo maro cudbi ah oo ka ilaaliya sariirta dharka xariir ah dhaawaca.
Nadiifiyaha Weelka Tufan ee TREBOL nadiifiye Vacuum Qalabka Sterilizer Gacantiisa Weeliyaha Tilmaamayaasha Ka-hortagga Caarada Mite
Mite sucker leh iftiinka UV ku habboon joodariga, bustayaasha, barkimooyinka, sofas iyo daahyada. Jeermis khafiifinta, shaashadda Hepa filter ee la dhaqi karo iyo howsha gariirka, oo gacan ka geysaneysa inay boodhku waxtar badan yeelato.
Ciidda boodhka caarada leh ee caarada ka sameysan ee ku habboon sagxadaha jilicsan sida joodariga, gogosha gacmaha, barkimooyinka, dharka sare, dharka, Sabanas ...
Filterka HEPA-ka badan ee iskuxiran ayaa qabanaya xitaa walxaha yaryar. Waxay ka hortagtaa uruurinta boodhka iyo qurubyada joodariga dusha sare ee hirarka hillaaca UV waa 253,7 nm, oo gacan ka geysata baabi'inta jeermiska, fayrasyada, microbes, caarada caarada ... tani oo ay weheliso xoogga sare ee nuugida iyo gariirka salka aaladda, gabi ahaanba waxay ka saaraysaa boodhka , Caarada iyo kuwa kale.
Waxay leedahay hawo hawada kulul oo loogu talagalay "qallalan" huurka suurtagalka ah ee dhiqlaha iyo joodariyaasha, oo sababa caarada iyo bakteeriyada. Weel laga qaadi karo, weel siigada hufan
Nadiifiiyaha 'TRÉBOL ADVANCE nadiifiyuhu' wuxuu tirtiraa dhammaan noocyada caarada ee ku soo ururta joodarigaaga. Isticmaal nidaamka iftiinka UV iyo nidaamka gariirka kaasoo si hufan uga saara meesha caarada, bakteeriyada iyo faayrasyada aan lagu baabi'in karin oo keliya awoodda nuugida nadiifiyaha faakuumka. Sidaa darteed, waxaan u baahan nahay sariir nolosheena ah meel nadiif ah oo caafimaad qabta leh aalad filter tayo sare leh u leh soo ogaanshaha dhinacyada.
Iris Ohyama IC FAC2 Furaashaanta / Hand / dahaarka / ridaysa vacuum nadiifiye / joodariga (400 W, nadiifiyaha tiisa, 24,5 13 x x 41 cm) soo bandhigay cad
Hufan. Tiknooloojiyada iyo tiknooloojiyada qalabka si loo xaddido boqolkiiba 98% 3 min. Hagaajin karo. Saddex qaab oo wax lagu garto - Hoose, Heer, Heer sare. Habka Heerka wuxuu kaloo u adeegaa sida hawada hawada kulul. Duufaanta hawada waxay fududeyneysaa in ay nadiifiso joodariga
Socodka wareegga. Tiknoolijiyada Cyclonic ee nadiifinta qolalka, joodariyeyaasha, boogaha ama jaranjarooyinka: socodka tooska ah iyo wareega wareega ee heesaha, wareega wareega iyo wareegga wareegga jirka
Gariirka. Ku dheji dhererka 20 cm wuxuu hubiyaa 6000 gariirka daqiiqadii. Boodhka guriga ee udhaxeeya fiilooyinka ayaa la jarayaa
Shidma. Dareenka xasaasiga ah wuxuu ogaanayaa boodhka guriga wuxuuna ku dhawaaqayaa dhamaystirka ujirta saddexda midab ee kumbuyuutarka (casaan, casaan, cagaar). Nooca iyo shilinta, kuwaas oo ay adagtahay in la arko indhaha qaawan, ha ka baxsan dareenka
User saaxiibtinimo. Nadiifiye nadiifiye ah (1,6 kg), cabitaan dheer (4 m), maadada xumaada (90) oo loogu talagalay soo saarida si fudud oo boogaha leh meelo badan oo wareegsan. keydinta Space. Faahfaahinta nadiifinta qashin-qaadka waxay qaadataa meel yar, waana mid deggan. Looma baahna taagan
Maqaalka horeRooti khaas ah
Maqaalka xigtaheerka sonkorta dhiigga
heerka sonkorta dhiigga
barkin qarsoodiga ah Side